Tababare Jurgen Klopp oo ka hadlay dhaawaca Kabtan Jordan Henderson – Gool FM
(Madrid) 19 Feb 2020. Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Jordan Henderson dhaawac muruqa ah looga saaray intii lagu guda jiray kulankii Liverpool ay guuldarada 1-0 kala kulantay Atletico Madrid ee Champions League, laakiin wuxuu ku rajo wayn yahay inuusan Kabtanku uusan muddo dheer garoomada ka maqnan doonin.
Henderson ayaa ciyaarta laga saaray daqiiqadii 80-aad, kaddib markii lagu bedelay James Milner waxaana ay hoggaamiyaasha Premier League habeen adag ku qaateen Madrid.
Gool ayey dhaliyeen marti galiyaasha kulankan afartii daqiiqo ee ugu horreysay ciyaarta, kaasoo uu dhaliyay Saul Niguez, waxaana uu noqday goolka looga adkaaday Reds.
Inkasta oo bedelka Sadio Mane uu ahaa taatikada si looga fogaado in casaan la siiyo kaddib markii uu qaatay kaarka jaalaha ah, ka bixitaankii Henderson waxaa sabab u ahaa dhaawac, Tababare Klopp ayaa rajaynaya inuusan muddo maqnaan doonin.
“Waxay ahayd dhaawac muruqa ah oo aan rajeynayay inaan ka digtoonaado,” ayuu Klopp u sheegay BT Sport ciyaarta kaddib, isagoo hadalkiisa intaa ku daray: “Ma hubo 100%, laakiin waan arki doonnaa.”
Henderson saaxibkiis Virgl Van Dijk oo ciyaarta kaddib hadlyay ayaa isaguna nasiib ku sheegay goolkii ay dhaliyeen Atletico waxaana uu yiri: “Waxaa nalaka dhaliyay gool ka imaaday gees ka laad, waxay ahayd fursadii ugu horreysay oo ay heleen, xitaa ma’ahan fursad ee waa nasiib.”